बिहे गरेको २ महिनामै म’र्नु पर्ने के आइपर्यो पुष्पलाई ? श्रीमानकै हात छ त ? आयो यस्तो वास्तविकता (भिडियो सहित) – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /Video/बिहे गरेको २ महिनामै म’र्नु पर्ने के आइपर्यो पुष्पलाई ? श्रीमानकै हात छ त ? आयो यस्तो वास्तविकता (भिडियो सहित)
परिवार र आफन्तले उनको मृ’त्यु अस्वभाविक भएको भन्दै निष्पक्ष छानविनको माग समेत गरेका छन् । उनले आ’त्मह’त्या गरेको परिवारका सदस्यले बताइरहेका बेला युवतीकी आमा सुशिला भुजेलले पुष्पाको ह’त्या नै भएको बताएकी छिन् ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **